श्रीमान बाहिर,नेपालमा श्रीमती गर्भवती !! कसको बच्चा भनेर सोध्दा नसोचेको जवाफले सबै चकित,पुरा हेर्नुहोस – Dainik Samchar
January 22, 2021 443
काठमाडौं । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घ’टनाहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले बाहिर आएको समाचार भारत बिहार राज्यको हो । जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो ?वास्तवमा, गर्भवती महिलाको पाँच वर्ष पहिले विवाह भएको थियो । ऊसँग डेढ वर्षकी छोरी पनि छ ।
तब सम्म सबै कुरा ठीक थियो । महिलाको नन्दका अनुसार उनकी भाउजु तीन महिनादेखि गर्भवती भइन् । जबकि उनको दाई लामो समय देखि सँगै छैन । दाई सात महिना देखि कोलकातामा छन् । सात महिना देखि भेटघाट नभएपछि भाउजुको पेटमा बच्चा कसरी आयो भन्दै प्रहरीमा उनले खबर गरिन्।
दैनिक भास्करका अनुसार नन्द यस बारे आक्रोशित थिइन् । उनी डिआइजी विकास विभवसम्म पुगिन् । उनले डिएनए परीक्षणको माग गर्न थालिन् । जब डाक्टरहरूले अनुसन्धान गरे, तब यो पत्ता लाग्यो कि बच्चा तीन महिनामा १२ दिनको भएको रहेछ ।नन्द रिसाएको मात्र थिइनन्, महिलाका पतिले पनि यो को हो भनेर प्रश्न गर्न थाले ? अब ती आइमाईले दिएको जवाफ सबैभन्दा रोचक छ। उनले गाउँ पञ्चायत बसेका बेला आफुसँग राती सपनामा आएर पतिले यौ’न स’म्बन्ध राखेको अनी बच्चा पनि उनैको भएको दावा गरिन् ।
तर, जब सम्पूर्ण परिवारलाई यो थाहा भयो, ती महिलाले भनिन् कि यदि तपाईले मलाई घरमा राख्न चाहानुहुन्छ भने राख्नुहोस्, अन्यथा म तिमीलाई केही झुठो केसमा फसाउनेछु। तर यस धम्कीको कुनै असर भएन र परिवारले त्यसलाई घरमा राख्न मानेन ।
कुरा यहीं समाप्त भएन । परिवारका सदस्यले महिलालाई साथमा राख्न अस्वीकार गरेपछि पञ्चायत बसे । त्यहाँकी महिलाले भनिन् कि बच्चा उसको पतिको हो । उनका पति सपनाहरुमा आउँथे। र यही कारणले गर्दा उनी गर्भवती भइन् ।पञ्चायतको समयमा महिलाको फोन पनि जाँचिएको थियो । उनको फोनमा केटाको नम्बर फेला पर्यो । त्यसपछि पोल खोलियो कि यो बच्चा त्यो केटोको हो, र यी महिला उसँग सम्बन्धमा छन् ।
Prevमन थामेर हेर्नुहोस बाध्यताले खाँ डी देशमा पुगेकी नेपाली चेलीको दर्दनाक (भिडियो)
Nextरबि लामिछाने न्यूज २४ छोडेपछि खाए आमाको क’सम ! औला उठाउनु परे जहाँ भेटिनछु त्यहि ढुंङ्गाले हान्नुस(भिडियो)
दुखद खबर, बस र स्कुटर ठोक्किँदा एकै घरका ३ जनाकाे मृत्यु
सीधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम कस्को ? रवि बिनै न्युज२४ ले चलायो कार्यक्रम (भिडियो सहित)
मनोज गजुरेलको दोस्रो बिवाहसगै पुर्व पत्नि मिनाको यस्तो अवतार नाच भयो भाइरल (हेर्नुस् भिडियो )
सेतो पानी बगिरहने समस्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार ! (16383)
काठमाडाैंको काभ्रेस्थलीबाट अचम्मकी महिला पक्राउ (5586)
१० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी हो रेखा थापा : शिल्पा (4830)
संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र हुने यस्तो चिन्ह, तपाईकोमा पनि छ की ? (4477)